Nilaza i Iran fa 'nirehitra nandositra' ny Boeing Iraisam-pirenena Okraina
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Nilaza i Iran fa 'nirehitra nandositra' ny Boeing Iraisam-pirenena Okraina
Janoary 9, 2020
Fikambanan'ny sidina sivily Iran nanambara izany Ukraine International Airlines Ny fiaramanidina Boeing 737 dia 'nirehitra tamin'ny sidina' talohan'ny nianjera tany ivelan'ny renivohitra renivohitra ny alarobia 8 janoary lasa teo, hoy ny filazan'ny masoivohom-baovao Tasnim ao Iran.
“May ny fiaramanidina nandritra ny sidina. Ny vavolombelona nanatri-maso dia nilaza fa nahita lelafo namono ny fiaramanidina », hoy ny vakiteny. Raha ny filazan'ny Organisation Aviation sivily Iran dia nisy fiantraikany tamin'ny tany ilay fiaramanidina.
Nihodina ny fiaramanidina taorian'ny fahitana olana ara-teknika ary niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina, nanonona ny Organisation Aviation sivily ao Iran i Tasnim News Agency.
"Ny lalan'ny fiaramanidina, izay niankandrefana tamin'ny seranam-piaramanidina, dia nanondro fa nanao fihodinana U taorian'ny nisehoana tsy fetezana ara-teknika," hoy ny fanambarana, ary nanampy fa "niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina ny fiaramanidina tamin'ny fotoana nitrangan'ny fianjerana. " Nanamarika ihany koa fa tsy mbola nisy tatitra avy amin'ny ekipa momba ny toe-javatra mahazatra momba ny sidina.
Ny sidina Ukraine International Airlines iray avy any Tehran mankany Kiev dia nidina tany akaikin'ny renivohitra Iran ny Alarobia fotoana fohy taorian'ny fiainganana. Raha ny filazan'ny minisitry ny raharaham-bahiny Okrainiana Vadim Pristaiko dia nahafatesana olona 176 ny fianjerana, anisan'izany ny teratany Iran, Canada, Ukraine, Sweden, Afghanistan, Alemana ary ny Fanjakana Mitambatra.
Mpandeha fitsangantsanganana handray kafe any Mountain Mountain Jamaica
'Chief Pilot' vaovao no mitondra ny lohany ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich